Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Marketing Affiliate ao amin'ny YouTube - YTpals
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Marketing Affiliate ao amin'ny YouTube
Hatramin'ny nanombohany ny taona 2005, ny YouTube dia nanolotra ireo mpivarotra maoderina amin'ny fotoana maro ahazoana vola sy hampiroborobo ny marika alohan'ny toeran'ireo mpihaino marobe. Izy io no motera fikarohana lehibe indrindra faharoa aorian'ny orinasa Google an'ny ray aman-dreniny, ary misy horonan-tsary an'aliny eo ambanin'ny sokajy samihafa. Fahafahana iray mahavariana azon'ny mpivarotra tao amin'ny YouTube ny marketing marketing.
Ny marketing Affiliate ao amin'ny YouTube dia ny famoahana horonantsary izay misy fampahalalana sy rohy izay mitarika ireo mpampiasa amin'ny vokatra asandratra amin'ny sehatra streaming-video. Ny atiny video dia manosika ny mpijery hividy vokatra amin'ny fitsidihana tranokalan'ny antoko fahatelo. Mandritra izany dia afaka mahazo komisiona amin'ny varotra rehetra ataon'izy ireo ianao amin'ny maha mpivarotra anao azy. Ny ampahany tsara indrindra: tsy mila mamokatra, manangona na mandefa an'ireto vokatra ireto ianao, ary azonao atao ny manomboka azy tsy misy fameperana maro.
Karazana horonan-tsary hamboarina ho an'ny marketing Affiliate YouTube
Amin'ny maha mpivarotra anao dia afaka mamorona horonantsary YouTube marobe ianao ary mahazo fidiram-bola. Andao hojerentsika eto izy ireo:
Famerenana ny vokatra sy serivisy
Na ho an'ny vokatra na serivisy io dia mety tsara ny famerenana! Tsy vitan'ny hoe mampiroborobo ny tolotra fotsiny izy ireo, fa mampahafantatra ny mpijery ihany koa ny lafiny samihafa. Afaka misafidy vokatra na serivisy iray ianao ary mandavaka lalindalina kokoa ny endri-javatra sy tombony azo hanosehana ny olona hividy na hanararaotra azy.
Ity dia horonan-tsary tsotra izay manasongadina ny manam-pahaizana manala ny vokatra vao natomboka tamin'ny fonosany tao anaty toerana mahazatra ary manazava ny antsipiriany isan-karazany izay sendra azy ireo raha vao manao izany izy ireo. Ny horonantsary Unboxing dia malaza indrindra amin'ireo mpankafy teknolojia izay mamerina mijery telefaona finday, solosaina finday, na gadget hafa.
Misy andiana olona goavambe mankany amin'ny YouTube hianatra zavatra vaovao. Azonao atao ny mamorona torolàlana amin'ny fomba mahomby sy mahasoa ary mampiditra rohy mankany amin'ny vokatra ao amin'ny faritra famaritana. Ity dia hampiseho ny fahaizanao ary hahasarika ny mpihaino anao, sady manome ny vaovao ilain'izy ireo.
Lahatsary "Best of something"
Ity angamba no iray amin'ireo karazana atiny video afiliana manokana azonao noforonina tao amin'ny YouTube ka ahazoam-bola. Ny sisa ataonao dia ny misafidy lisitry ny vokatra avy amin'ny sokajy manokana, ohatra, kiraro, mpanitsy volo, lakozia, na vokatra hafa, ary ampahafantaro ny mpijery ny tombony sy ny fatiantoka entiny.
Torohevitra momba ny marketing amin'ny Affiliate ao amin'ny YouTube
Ireto ambany ireto misy toro-hevitra sy tetika vitsivitsy hisamborana ilay lalao marketing marketing miaraka amin'ny YouTube:
Manatsara ny votoatinao video amin'ny YouTube miaraka amin'ny teny lakile mifandraika amin'ilay famaritana sy lohateny ho hita eo amin'ny fangatahan'ny olona karoka.
Mifantoha amin'ny SEO hiseho amin'ny valin'ny fikarohana biolojika amin'ny alàlan'ny fampiasana Ahrefs.
Mamorona sary kely mety tsara hisarihana ny sain'ny mpijery ary hanosika azy ireo hanindry ny bokinao amin'ny farany.
Mifantoha amin'ny fampitomboana ny isan'ny mpamandrika amin'ny fantsonao YouTube amin'ny alàlan'ny fitazonana ny maha-zava-dehibe sy mifanaraka ny atiny horonan-tsary.
Alaharo ny paikadinao momba ny fampiroboroboana horonantsary hahitanao ny fahitana amin'ny fizarana horonan-tsary mifandraika amin'ny YouTube.
Nahoana ianao no tokony hieritreritra marketing marketing amin'ny YouTube?
Ny marketing Affiliate ao amin'ny YouTube dia nanjary safidy mahasoa ho an'ireo mpivarotra izay maniry ny hahazo vola nefa tsy miatrika sakana maro. Ity endrika marketing ity dia mamela azy ireo hahatratra mpihaino marobe sy hahatratra fitomboana avo lenta noho ny fitomboan'ny lazan'ny atiny video tato ho ato. Raha jerena ireo algorithma marim-pototra ao amin'ny YouTube, ianao amin'ny maha mpivarotra anao dia afaka mahita fitomboana tsy tapaka amin'ny fatran'ny organika anao nefa tsy mila mandany vola be. Ary koa, ny horonan-tsarimihetsika YouTube miasa dia manangana ny fahatokisan'ny marika anao - zavatra mitaona ny olona haneho tsy fivadihana amin'izany.
Koa satria ny atin'ny horonan-tsary dia mitarika ny habaka an-tserasera anio ary tokony hitovy izany na dia amin'ny ho avy aza, dia tokony hoheverinao tokoa ny manao marketing Affiliate amin'ny YouTube hampitombo ny varotra sy hahatratraranao ny farany ambany indrindra.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Marketing Affiliate ao amin'ny YouTube avy amin'i YTpals Writers, 23 Septambra 2020
YouTube dia nipoitra ho fitaovana mampidi-bola amin'ny famoahana sy famatsiana votoaty marobe. Ny mpamorona votoaty dia nandray ny sehatra media sosialy ho toy ny fitaovam-pifandraisana mahery vaika. Ny fampandehanana fantsona YouTube anefa dia…
Ny marketing amin'ny horonan-tsary dia iray amin'ireo paikady ara-barotra malaza sy manan-danja indrindra amin'ny 2022. Tsy misy zavatra mahasarika ny maso toy ny horonan-tsary kalitao. Betsaka ny fahafahana ho an'ny tompona orinasa, matihanina SEO, ary mpivarotra…
Fa maninona no lasa adala be toy izao ny dokotera YouTube amin'izao fotoana izao?
YouTube dia fonenan'ny karazan-dahatsary samihafa. Na dia lasa mahazatra aza ny horonan-tsary fohy sy malaky, dia misy akany iray hafa izay mitombo be tokoa. Miresaka momba ny tahirin-kevitra YouTube eto izahay. Ny rakitra dia…